A na-ahụ ọhụụ ọhụrụ nke LG Watch Sport na Style tupu oge eruo, na-ekpughekwa atụmatụ ha bụ isi | Akụkọ akụrụngwa
Ozugbo ekwuputara ngosipụta nke LG G6 na usoro nke Mobile World Congress, ọ dị ka ọ gaghị abụ naanị ngwaọrụ LG ga - egosi ma ọ dị ka ọ ga - esiwanye ike na anyị ga - ahụ ọkwa ọhụụ maka ahịa smartwatch. Kemgbe ọtụtụ izu, anyị na-anụ asịrị ọhụrụ LG Watch Sport na Style, na taa anyị mechara nwee ike ịhụ ha na nhicha edozi, na-amatakwa njirimara ndị bụ isi ha.
Ngwaọrụ ikpeazụ nke ụdị a nke LG malitere Lelee nke mepere emepe, otu afọ gara aga, na O yiri ka ụlọ ọrụ South Korea chọrọ ịnọ na ndụ na ahịa a na ngwaọrụ ọhụrụ abụọ, jiri nlezianya jiri ya na Android Wear 2. Wụnye n'ime.
Anya abụọ ahụ ga-enwe ihuenyo okirikiri ma nwee okpueze nke ga-eme ka anyị nwee ike ịga ma ọ dịkarịa ala. A ga-eji onye ọ bụla n'ime ha mee ihe maka ndị na-ege ntị kpọmkwem ma n'oge ahụ anyị amaghị nkọwa ọ bụla gbasara ọnụahịa nke anyị ga-esi nweta ha.
Ihe anyị maara bụ nke ha njirimara na nkọwa, nke anyị na-egosi gị n'okpuru;
Ihuenyo 1.38 nke anụ ọhịa nwere mkpebi nke 480 x 480 pikselụ
GPS na obi ọnụego nyochaa
Ihuenyo 1.2-inch nwere mkpebi nke 360 x 360
LG mepụtara ngwaọrụ abụọ yana Google ya na enweghị obi abụọ anyị nwere ike ịtụ anya smartwatches abụọ nke kachasị adọrọ mmasị, nke ga-enwe gam akporo Wear 2.0 arụnyere na obodo, nke na-adịghị ugbu a maka ngwaọrụ nke ụdị a dị na ahịa.
Kedu ihe ị chere maka LG Watch Sport na Style ọhụrụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » A na-ahụ LG Watch Sport na Style ọhụụ tupu oge eruo, na-ekpughekwa atụmatụ ha
Nokia ga - ewepụta mbadamba 18.4 nke anụ ọhịa na MWC